विप्लव समूहले बुझे हुन्छ सरकारले ठट्टा गरेको होइनः प्रधानमन्त्री ओली « Bagmati Samachar
विप्लव समूहले बुझे हुन्छ सरकारले ठट्टा गरेको होइनः प्रधानमन्त्री ओली
३ चैत्र २०७५, आईतवार ०७:२३
३ चैत । विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी अनधिकृत झुण्ड बताए । विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसित कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह कुनै कार्यालयमा दर्ता नभएको अनधिकृत संस्था भएको बताए । “जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो– सरकारले चिन्दैन,” उनले भने । प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूह राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले गरेका विध्वंसात्मक गतिविधिमात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । विप्लव समूहमाथिको प्रतिवन्ध र सिके राउतसँग गरेको सहमतिको विरुद्धमा दृष्टिकोण बनाउँदा इतिहासलाईसमेत जवाफ दिनसक्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘नेताहरुलाई मेरो आग्रह छ कि इतिहासलाई जवाफ नै दिन नसक्ने कुरा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ, सरकारले नेपालको कानून बमोजिम दर्ता भएर चलेको दललाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन ।’ विप्लव समूहका बारेमा धारणा राख्दा सचेत हुन प्रधानमन्त्रीरले नेताहरुलाई आग्रह गरे । “नेपालका नेताजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैँलाई जवाफ दिन नसक्ने कुराहरु नगर्नुहोस्, उनको पार्टी कही दर्ता भएको थियो र ? दर्ता छैन ।
नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने झुण्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने जस्तै हो,” उनले भने, “बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने । बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? गम्भीर राजनीति गर्नुपर्छ ।” बम पड्काउने, मान्छे मार्ने, जन्तीको बसमा आगो लगाउने, चन्दा आतंक चलाउने, धम्की, लुटपाट र विध्वंशका जस्ता गतिविधिलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको प्रधानमन्त्रिले बताए । ‘यस्ता कृयाकलापमाथि प्रतिवन्धमात्र होइन सरकारले नियन्त्रण पनि गर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विप्लव समूहले पनि बुझेहुन्छ कि सरकार ठट्टा गर्दै छैन , यस्ता कामलाई प्रतिवन्ध होइन नियन्त्रण गर्छ सरकारले ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत, कानुन विपरीत, लुटपाट र आतंकका गतिविधि गर्न नपाइने बताए । उनको प्रश्न थियो, “नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन ? वार्ता समिति बनाएको हो, गर्दिन भनेको होइन ? सभ्य समाजले सुन्न सक्ने माग छ ? के–के माग छ ? सुन्न सक्ने छन् ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताए । “एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो,” उनले भने, “पुनर्गठन हुँदैन ।”